Archité ambanivohitra kely - ny fironana sy ny vokatra farany an'ny City Form Design
Archité kely dia vondrona vondrona tranobe kely izay misy fiantraikany lehibe amin'ny fahatsapan'ny habakabaka ny mpampiasa azy.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo singa voafantina voafaritra tsara ny maritrano izay entin'ilay faritra mandrindra ny toetra, ny fanehoana ary indrindra ny rehetra, dia miasa.
Ny fanaka an-dalambe dia misy fiantraikany amin'ny faritra manodidina, miaraka amin'ny zavamaniry sy trano, mandray anjara amin'izany baiko spatial.
Ny maritrano kely an-tanàna dia lasa izay manavaka ny tanàna.
Manaraka eo amin'ny toerany, tsangambato na toerany indrindra, natao tsara trano maritrano kely mety ho lasa izay hotsaroan'ny mpizahatany foana.
Izy io dia hifandray amin'ny tanàna iray. Hanavaka azy ireo eo amin’ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena.
Ankehitriny, ny metropolise maimbo sy maoderina dia mifaninana amin'ny tsirairay ary antsoina hoe manintona indrindra tsy ho an'ny mpizahatany ihany, fa ho an'ny mponina kosa, izay tsy isalasalana ny maha-zava-dehibe azy.
Nahomby tsara dabilio, heva, latabatra, vilany voninkazo ary singa playgrounds mahavita mamelona ny manodidina, mamelona fanahy vaovao ao aminy, mampiavaka azy ary maneho azy.
Vokatr'izany dia ireo vondron'olona sy mpizahatany no hilana mitsidika azy matetika.
Tranon-tanàna kely - asany
Misafidy singa amin'ny fanaka an-dalambe, amin'ny fomba tsy hita maso, manampy amin'ny fitazonana sy hanitsiana ny fiasan'ny toerana amin'ny habaka.
Ny ohatra tsara dia afaka Lahatsoratramanakana ny fivezivezena boribory na be dia be flowerpots misy voninkazo.
Mandritra izany fotoana izany, dia haingon-trano ireny ary miaro ny fiara tsy hijanona eo amin'ny tanàna voarara na mametra ny fidirana amin'ny promenade.
Ohatra iray hafa amin'ity karazana ity ny rakotra hazo, izay miaro ny volon'izy ireo, mametra ny fahasimbana ary manisy ravaka manokana.
Na izany aza, ny fanaka an-dalambe dia ambonin'izany rehetra izany zaridaina sy fanaka an-dalambe.
Anisan'izany ny karazana isan-karazany dabilio.
Ny vahaolana midadasika dia mamela ny fampiasana singa mifangaro tsara amin'ny tontolo manodidina.
Ny malaza indrindra dia dobika vita amin'ny hazo, fa matetika kokoa dia misy hady vy, amin'ny lokony sy ny endriny, ary koa ny fako amin'ny rindrina mivaingana, saika mitovy amin'ny sary sokitra.
Ho an'ny dabilio, ny mpampiasa an-tanàn-dehibe dia azo antoka fa hampiasa seza fantsom-baravarana, izay mifanaraka tsara fa tsy eo amin'ny boulevard, eny amoron-dranomasina amin'ny rano ihany, fa eo amin'ny zaridainam-panjakana, manatrika ny masoandro.
Ny orinasa no mpaninjara ny vokatra vita amin'ny fanaka maoderina Famolavolana tanàna.
Miasa mivantana miaraka studio maritrano ary mpanaingo mba hisafidy ny fomba tsara indrindra sy ny endriny ilaina amin'ny singa amin'ny maritrano.
Ankoatra izay, dia manohana Fikambanan'ny mpanao maritrano, amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa mivantana, ary koa ny fanomezana vahaolana sy vokatra farany.
City Forum Design no solontenan'ny orinasa italianina tena mahay any Polonina - Metalco, Bellitalia ary Famolavolana tanàna.
Metalco - vy sy hazo
Ny maritrano kely an-tanandehibe dia lohahevitra iray fantatry ny orinasa Italiana Metalco.
Manolotra vokatra marobe isan-karazany, indrindra avy amin'ireo sokajy manaraka ireto: trano maritrano kely ary kely Archité urban.
Ny tolotra an'ny Metalco dia misy ny tsara indrindra vahaolana ho an'ny fampivoarana mavitrika sy mavitrika amin'ny valan-javaboary, arabe, zaridaina ary serivisy.
Metalco dia mamokatra dabilio zaridaina, dabilio zaridaina, dabilio ao an-tanàna, dabilio fitobiana - samy dabilio hazo sy vy.
Ankoatr'izay, ny vondron'ity orinasa ity dia ahitana harona, tsanganana, tabilao fampahafantarana, rakotra hazo, vilany voninkazo, mijoro bisikileta, sakana ary misy karazana fanaka eny an-dalambe: fantsom-baravarankely, mety ho an'ny pier, boulevard, ary ho an'ny zaridaina na zaridainan'ny tanàna.
Bellitalia - singa mivaingana sy vato
Bellitalia dia iray amin'ireo orinasa orinasa manorina eropeana fivondronana mivaingana an-tanàn-dehibe sy vato voajanahary, fantatra amin'ny vahaolana ho an'ny maritrano kely sy ny fananganana trano.
Efa niasa 40 taona mahery izao ny orinasa, manavaka ny tenany amin'ny vokatra avo lenta, fanavaozana ary endrika maoderina.
Fanaka an-dalambe ao tetikasa Ny orinasam-paritra dia misy mamboly vita amin'ny mony sy zaridainan'ny tanàna ary ny tanàna. Ny dormitory dia matetika no castra mahomby, mamorona sary sokitra manokana.
Ambonin'izany, ny Bellitalia dia manolotra vilany vita amin'ny manda sy vato maro, tsy ho an'ny voninkazo tokana na fandriana voninkazo, fa koa amin'ny hazo fambolena.
Ankoatr'izay dia manavaka ny amin'ny fananganana loharano, lahatsoratra izay mampisaraka na mametra ny fifamoivoizana amin'ny promenades sy ny kianja filalaovana, ary koa ny fitoeram-pako miendrika vita amin'ny vato vita amin'ny mivaingana, vato na maka sary.
Famolavolana tanàna - endrika maoderina
Archité kely tanimboly, sakan-jiro, tabilao fampahalalana amin'ny loko lamaody.
Ny dabilio zaridaina dia mahasarika ny masony amin'ny endrika maoderina. Singa haingon-trano, vilany voninkazo, dustbins, toeram-pialofana bisy, na lahatsoratra manakana Ny fifamoivoizana an-dàlana dia sasany amin'ireo vokatra maritrano amin'ny tanàna Famolavolana tanàna.
Ny fenitra avo lenta amin'ny vokatra ao amin'ny City Design dia azo antoka amin'ny fanaraha-maso tsy tapaka ny fitaovana sy ny dingana teknolojia.
Amin'izao fomba izao Famolavolana tanàna dia afaka manome toky anao ny haben'ny vokatra ao, ary koa ny fanarahana ny fenitra, ny fiarovana, ny ekolojia, ny aesthetika ary ny fampiononana ny mpampiasa.
halatra bozakahidin-tranoflowerpotsharona eny an-dalambedab tranoLapan'ny tanànaLavnan'ny zaridainaLavaramboAripy vympizara fizarana kelymari-trano kely tanànatrano maritrano kelylalàna momba ny fananganana trano maritranompamokatra trano maritranotrano kely tao an-jaridainafanaka an-dalambempiambina hazoplaygroundsLahatsoratralamasinina am-bisikiletaboard information